Date My Pet » 3 Tips To Mampiaraka Vanim-potoana nandritra Exam
Last nohavaozina: Jan. 12 2021 | 2 min namaky
Izany andro izany ny taona indray. Fotoana fanadinana dia snuck ny anao, ary efa lasa ny zava-doza ny fisiany. Maro be ny rehetra-nighters, andro adin-tsaina sy ny ora ny cramming no ny ainy ho mpianatra dia ahitana ny. Efa nandeha an-tongotra aho manodidina fonenan'ny mpianatra, ary nahatsapa aho amin'ny Zombie Apokalypsy- izay no ny tsy fahampian'ny torimaso sy ny overdose ny kafe sy ny vatomamy ho an'ny eo ho eo no mpianatra.
Vokatry ny fanadinana hafa ny fotoana dia mahazo miady saina isika rehetra amin'ny fotoana iray, ary maka azy avy tamin'ny olona akaiky indrindra antsika. Tsy vaovao tsara ny mampiaraka ho an'ny fiainana. Angamba ianao mahatsapa ho toy ny tsy manana fiainana ara-tsosialy ary ny lalao dia nidina ny tatatra. Raha toa ianao ka tsy mbola tonga saina izany, ianao momba ny.
Soa ihany, tsy mila miahiahy. Ireo 3 soso-kevitra dia afaka manampy anao ace ny fanadinana raha marika avo foana eo amin'ny fiainana mampiaraka.
Diniho indray mihazona ny hatsarany.
Fotoana fanadinana fotoana iray manan-danja eo amin'ny fianarana asa, ka mety ho manan-tsaina izany hevitra mba mangatsiatsiaka ny daty. Koa satria te hanao tsara amin'ny fanadinana, tsy te-vivery izany amin'ny tsy hita avy eo amin'ny fotoana fianarana sarobidy noho ny roa daty. Raha ianao in-lalina ny fianarana ara-tsiansa sy ny raharaham-barotra rijan-toe-javatra, mianatra ny fomba vetivety mandà ny mpiaro dia ho soa ho anao sy ny mpiara-miasa.
Mila mahay mandanjalanja dia toy ny zava-dehibe toy ny kafeinina.
Red Bull, gilasy, poti-sy ny kafe toa hampitombo avo lenta ny manan-danja nandritra ny fotoana fanadinana. Na izany aza, dia tsy hita fa tena nanampy tokoa raha ny mampiaraka, ka mizana no namana tsara indrindra vaovao. Dia tsy hanao soa ianao raha mandalina ny andro, mandritra ny alina, tsy hahita tara-masoandro, ary tsy manao na inona na inona fialan-tsasatra. Fihazonana hampifandanja ny fianarana sy ny fialan-tsasatra dia zava-dehibe, ary efa voaporofo mba hanatsara ny fahaiza-manao sy ny fanadinana mianatra fampisehoana.
Mety tsara amin'ny andro ho unwind, adin-tsaina, ary Miaina ao sasany tara-masoandro no fototra. Ireo fiatoana fianarana ho fahafahana tsara mandany fotoana amin'ny olon-tiany. Diniho manana sarimihetsika alina matetika rehetra, na mijery fahitalavitra iray miara-.
Afa-, fahazoana ivelany ary manao zavatra tsara dia asa bonding, ary koa ny soa ho an'ny fahasalamana ankapobeny- mahita toy ny sakafo dia ahitana ny siramamy sy ny kafeinina. Mandehana ho fohy fari eo cramming fotoam-pivoriana sy ny tsikera mavaivay momba ny adin-tsaina amin'ny fiainana fianarana ambony. Rivotra madio dia mitazona ny atidoha vaovao.
Na ny fiainana fohy Chats ny Skype, Niady hevitra an-telefaonina fotsiny mba hihaino ny feony, hamihina alina tara fivoriana na matory-overs, ho azo antoka foana ny mandanjalanja ianao eo amin'ny asa sy ny lalao.
fankalazana ny fotoana.
Ity iray ity ny fanazavana tena tsara tarehy. Aza adino ny mankalaza ny fanadinana indray mandeha no resy! Drafitra zavatra mahafinaritra fa samy ny azonao atao mba hankalaza ny fandresena ny rocking ny fanadinana rehetra sy ny hamelona indray ny fifandraisana. Raha misy mazoto ianao Beaver sy drafitra zavatra mialoha dia homena anao izany zavatra ny hiandrandra ny.
Ireo 3 soso-kevitra hanampy anao foana ny afo eo amin'ny fiainana ny fitiavana nandritra ny fe-potoana fanadinana somebiseby erỳ. Amin'ny alalan'ny fandalinana ireo tidbits ny fahalalana sy ny tsy hita isa antokony, ianao ho afaka handresy ny fanadinana sy ny mampiaraka ny fiainana.
Katz amin'ny alika : A Commonsense Torolalana ho an'ny Training sy Living amin'ny alika
Ahoana no To Raiso ny Dingana Voalohany Amin'ny Online Dating